Ny mpitarika, antso ho amin'ny fanoloran-tena
«Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an' i Jehovah, dia fidionareo anio ary izay hotompoinareo; na ny andriamanitra izay notompoin'ny razanareo tany an-dafin'ny Ony, na ny andriamanitry ny Amorita, izay mponina teto amin'ny tany onenanareo; fa raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an'i Jehovah izahay.» - Jos. 24:15.
Mahaliana ahy manokana ireo fihetsehana sy fanapahan-kevitra izay tokony hotanterahina amin'ity fivoriana ity (Fivorian'ny Foibe Manerantany tamin'ny 1901) izay nijerena tamin'ny fomba miavaka ny zavatra tokony ho natao taona maro lasa izay, ny marimarina kokoa dia folo taona lasa, raha nivory isika, ka ny Fanahy sy ny herin'Andriamanitra dia tonga tamin'izany fivoriana izany, nanamarina fa Andriamanitra dia vonona hiasa ho an'ity vahoaka ity raha manaiky ny fandaminana asa izy ireo.
Nomena ahy ny fahazavana fa ity vahoaka ity dia tsy maintsy hijoro ho ambony noho ny firenena hafa manoloana ny tany rehetra, ka ho vahoaka mahatoky, haneho amim-pitsikiana ny fahamarinana. Ny hery manamasin'ny fahamarinana, voaseho eo amin'ny fiainan'izy ireo, dia hampiavaka azy amin'izao tontolo izao. Tsy maintsy mijoro eo amin'ny fahamboniana ara-moraly izy ireo, manana karazam-pifandraisana akaiky amin'ny lanitra izay ahafahan'Andriamanitry ny Isiraely manome azy ny toerana eto an-tany.
Efa an-taonany maro no nampahafantarina, fa ny filamatra izay afaka hanandratra ny olona dia tsy mbola voatenona tao anatin'ny asa. Efa nomen 'Andriamanitra fahazavana ny amin'izay tokony hataony sy ny tsy tokony hataony izy ireo, fa niala tamin'izany fahazavana izany izy. Fa tena fahagagana ho ahy ny hoe mijoro eo amin'ny fahombiazana lehibe toy izao isika amin'izao fotoana izao. Izany dia noho ny famindrampo lehiben 'Andriamanitsika, tsy noho ny fahamarinantsika anefa, fa mba tsy hanalam-baraka eo amin'izao tontolo izao ny Anarany (...)
Ny Tenin'Andriamanitra no tokony ho mpitarika antsika. Efa mba notandremantsika ve ny Teny? Ireo vavolombelona dia tsy natao mihitsy na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, haka ny toeran'ny Teny. Natao hitarika anareo ho eo amin'Ilay teny tsy noraharahina izy ireny, mba hihinananareo ny tenin'i Kristy, ka hivoky amin'izany. Ary amin'ny fiainam-pinoana dia afaka hiorina avy amin'izay nivokisanareo ianareo. Raha miaina ao amin'ny fankatoavana an'i Kristy sy ny teniny ianareo, dia hihinana amin'ireo ravin'ny hazon'aina, izay fanasitranana ny firenena rehetra. - GCB, 3 Aprily 1901.